Hashtags Research & Profaịlụ njikarịcha profaịlụ
Zụta Ndị na-eso ụzọ Instagram Akpaghị aka
Zụta Vidio Vidio Facebook
Zụrụ Facebook Fan Page Mmasị
Zọ kachasị mma iji nweta ndị na-eso ụzọ Instagram na mmasị na ihe masịrị ha!
TurboMedia.io bụ ihe ngwọta dị mfe ma dị irè iji nweta ọsọ ọsọ na ndị na-eso ụzọ Instagram nwere mmasị na nchekwa! Nhọrọ ndị akwụ ụgwọ mara mma na nke akwụrụ ụgwọ dị iji dabaa mkpa nke onye ọ bụla.
Nweta ndị na-eso ụzọ Instagram na Mmasị
Inweta ndị na-eso ụzọ Instagram na mmasị dị mfe!
Soro Ntuziaka Dị Mfe
Emere na 30 ruo 60 sekọnd!
Kedu ihe kpatara iji TurboMedia.io?
TurboMedia.io na-enye netwọkụ ohuru nke na-enye gị ohere ịnata ngwa ngwa ma dị mfe 10 ndị na-eso ụzọ Instagram n'efu na 10 free Instagram amasị ọ bụla 48 awa! Atụmatụ ịkwụ ụgwọ dị, mana atụmatụ ndị a na-akwụghị ụgwọ ka dị irè na-eto eto profaịlụ gị. Enweghị paswọọdụ achọrọ, na-edebe ozi profaịlụ nke Instagram gị nke ọma.
Ezubere TurboMedia.io ka ọ dị mfe dịka mmadụ nwere ike ime! Oge gị dị mkpa ma anyị ghọtara nke ahụ. Iji nweta ndị na-eso ụzọ n'efu ma nwee mmasị, mezue nyocha ma ọ bụ omume 5 na 30 ruo 60 sekọnd ma ịmechaa! Almost ga - enweta ọrụ ị rụọ ọrụ ozugbo ị nwere ike ịmegharị usoro ọ bụla 48 awa.
Mgbe ị megharịrị atụmatụ n'efu ma ọ bụ nke akwụrụ ụgwọ, ị ga-ahụ ndị na-eso ụzọ gị ma nwee mmasị ịmalite ịba ụba ozugbo. Jiri aka rụọ ọrụ atụmatụ efu na awa 48 ọ bụla ma ọ bụ rụọ ọrụ atụmatụ 100% akpaghị aka. Mee atụmatụ a na-akwụ ụgwọ ma nata ndị na-eso ụzọ kwa izu ma nwee mmasị na ọkwa ọhụrụ ọ bụla ị mere n'ime nkeji!
Nhọrọ efu na nke akwụ ụgwọ
Ndị na-eso 15 ($ 20.00) Ndị na-eso 30 ($ 40.00) Ndị na-eso 60 ($ 80.00)
Nweta ndị na-eso ụzọ 15 kwa ụbọchị
Anapụta Ndi Oge 48 Kwa
Ate na-eme 1x Kwa Oge 48
Mmasị nke 25 ($ 20) Mmasị nke 50 ($ 40) Mmasị nke 100 ($ 80) Mmasị nke 200 ($ 160) Mmasị nke 500 ($ 350) Mmasị nke 1000 ($ 700)
Nweta 25 Likes Per Post
Nweta ndị na-eso ụzọ Instagram na-akwụghị ụgwọ: Mụta Ihe Na-enye Gị
Na Jenụwarị 2020, Instagram kọrọ ihe ruru otu ijeri ndị ọrụ kwa ọnwa. Bịa na Jenụwarị 2021, ọnụ ọgụgụ ahụ ga-arịgo ọtụtụ ọkwa na mmụba ngwa ngwa nke ndị ọrụ Instagram na-egosi naanị etu ikpo okwu rutela. Taa, Instagram bụ igwe na - akpata ego maka azụmaahịa na ndị na - ahụ maka mgbasa ozi na - elekọta mmadụ, nke mere na ọ karịrị sọftụwia na-elekọta mmadụ. N'aka nke ọzọ, ọ bụ ọrụ ọtụtụ mmadụ. Brandsdị ndị kachasị emetụta na ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-eme ọtụtụ nde kwa post, yabụ gịnị kpatara ị ga-eji hapụrụ gị? Tupu ịmalite ịkpata ezigbo ego na Instagram, ị ga-arụsi ọrụ ike iji zụlite onyonyo gị n'elu ikpo okwu. E nwere ihe ole na ole na-ekpebi otu ngwa ngwa na ego ole ị na-enweta site na Instagram. Ndị a gụnyere onye ị bụ, ụkpụrụ akara gị na-anọchi anya, ihe ị ga-enye, yana mmadụ ole tụkwasịrị gị obi ma chigharịkwuru gị maka azịza. Abtọ njirimara gị mara na ijide ogo ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ bụ oke ọrụ gị. Mana, enwere ụzọ iji mee ka ọnụ ọgụgụ ụmụazụ gị bawanye. Nhọrọ iji nweta ndị na - eso ụzọ Instagram na ndị ọzọ akwụ ụgwọ nwere ike ịnye gị ohere karịa ndị asọmpi gị. Nke a bụ ọkachasị gbasara iru ndị na-ege gị ntị na-enwe mmetụta na-adịgide adịgide. Na post a, anyị ga-elebakwu anya n'inwekwu ndị na-eso ụzọ Insta nwere ike ịrụ ọrụ ebube nye gị. Yabụ, n'ebutụghị oge, ka anyị banye n'ime ya!
Uru dị n'inwekwu ndị na-eso ụzọ na Instagram
Na Instagram, mgbalị bụ ụzọ na ego bụ njedebe. Agbanyeghị, ị ga-erute ebe ahụ mgbe ị nwere karịa ndị na-eso ụzọ Instagram. Ndị a bụ ụfọdụ uru dị ịtụnanya ị ga - amalite ịhụ ozugbo ndị na - eso ụzọ gị na - arị elu mgbe niile.
Ndị ọzọ na -ewere ngwaahịa gị: Ihe ị ga -enye agaghị ewepụta nnukwu mkpọtụ ọ gwụla ma ọ gafere ọtụtụ mmadụ n'etiti ndị na -ege gị ntị. N'inwe ọtụtụ ndị na -eso ụzọ, ị ga -enwe ọtụtụ ndị mmadụ na -aga n'ihu na -abụghị naanị ịkekọrịta ọdịnaya gị kamakwa ịzụta ngwaahịa gị. Ụfọdụ niche Instagram kacha baa uru gụnyere njem na njem, ịma mma, ahụike na ahụike, ejiji, ịzụ nwa, ibi ndụ, azụmaahịa, nri, foto na egwu. Were Jane Selter dịka ọmụmaatụ. N'ihe karịrị nde mmadụ 12 na-eso ụzọ Instagram, ụdị mgbatị ahụ bụ onye ama ama na Instagram maka ịkwalite mmega ahụ, ahụike na ọdịmma n'ozuzu ya. Jane bụ ihe atụ zuru oke nke onye nwere mmasị na ihe (n'ọnọdụ ya, ahụike). Ọ na-ejikwa oge ya na-ekerịta ya na ndị nwere ụdị echiche gburugburu ụwa. Taa, Selter na -enweta ezigbo ego site na mmemme mgbatị ahụ a kwụrụ ụgwọ ya yana site na Instagram, ebe ọ na -agbakwunye ndị na -eso ụzọ ya ụbọchị ọ bụla na -agafe.
Ị nwere ike ịpụta na ibe Insta's Explore: Mgbe ịmere onwe gị aha na niche gị ma nwee ọmarịcha-eso ya, post gị nwere ike ịpụta na ibe nyocha nke Instagram. Anyị na-eji okwu ahụ bụ 'ezigbo-ezuru' n'ihi na ọ nweghị iwu siri ike na-agba ọsọ gbasara ndị na-eso ụzọ ole ị kwesịrị ị ga-apụta na Instagram Explore. Emegharịrị ibe nyocha nke Instagram na Mee 2019 ma ugbu a, ọ nwere ogwe igodo na-enye ndị ọrụ ohere ịhọrọ ụdị ọdịnaya ha chọrọ ilele. Nhọrọ ndị a gụnyere IGTV, nke bụ ikpo okwu Insta nke ya maka ikiri vidiyo ogologo oge (otu nkeji-gbakwunyere vidiyo), yana ụlọ ahịa - ụlọ ahịa ịzụ ahịa Instagram. N'akụkụ IGTV na ụlọ ahịa, ndị ọrụ nwekwara ike họrọ ọwa isiokwu iji lelee ọdịnaya sitere na ya. niches ha nwere mmasị na. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na akaụntụ Instagram gị bụ ihe niile gbasara nri, enwere ike ịpụta gị na ibe nyocha nke onye ọrụ na-achọ ọdịnaya metụtara nri. Igosipụta na Instagram Explore nwere ike ime ka ọwa gị jikọọ na ndị ọrụ na-amaghịdị na ị dị adị yana ihe ị ga-enye.Instagram na-enye ugbu a ụdị ụdị ịzụta mgbasa ozi na Explore. Ọ bụ ezie na egosighi mgbasa ozi azụrụ na nri Explore n'onwe ya, ha nwere ike ịga n'ihu na ohere ịchọta akara gị.
Mụbaa okporo ụzọ weebụsaịtị: Ọ bụrụ na ika gị na -arụ ọrụ na webụsaịtị gọọmentị ya, mgbe ahụ ị ga -eji Instagram dị ka ikpo okwu iji zụọ weebụsaịtị gị. Ị ga -ahụ ọtụtụ blọọgụ na akụkọ na ịntanetị nke na -akwado ịme usoro ole na ole dị mfe. Ndị a gụnyere ịgbakwunye njikọ na webụsaịtị azụmahịa gị na akụkọ ndụ Instagram gị yana foto na vidiyo gị niile ezigara. Agbanyeghị, ọ gwụla ma ị nwere ndị na-eso ụzọ zuru ezu, ị gaghị atụ anya na Instagram ga-abụ ikpo okwu iji jikọọ webụsaịtị gị na ndị na-ege gị lekwasịrị anya. ịdebanye aha maka ọrụ na -enye gị ohere ịnweta ndị na -eso ụzọ Instagram n'efu. Ka ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ gị na-arị elu, otú ahụkwa ka ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa na webụsaịtị webụsaịtị nke ika gị ga-abawanye. Ọ bụrụ na ị na-agba mbọ zuru oke iji hụ na webụsaịtị gị bụ injin-nchọ kachasị site na ịgụnye mkpụrụokwu ziri ezi n'oge niile, nsonaazụ jikọtara ọnụ nwere ike ịdị mma. Ogo ogo ọchụchọ webụsaịtị gị ga -aka mma, na -eme ka akara gị pụta ìhè ọ bụghị naanị na Instagram, kamakwa na nyiwe dị ka Google, Yahoo, na Bing.
Nwetakwuo nlebara anya na YouTube: YouTube bụ nnukwu mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ ụwa ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-achọ YouTuber, ịgaghị eme ihe gị na YouTube. Debe profaịlụ nke Instagram ma cheta iji ya arụ ọrụ. Dịka ị ga-eme maka webụsaịtị, mado njikọ njikọ ọwa YouTube gị na Insta bio gị ma na-aga n'ihu na-emelite njikọ gị na vidiyo YouTube nke ebipụtara na nso nso a. webatara gị na Instagram. Gụnye nkọwa nke vidiyo YouTube gị na ọwa na akụkọ ndụ gị nke Instagram ga -agba ndị na -eso ụzọ Instagram dị adị ume ka ha gafere na ọwa YouTube gị. Ọ bụrụ na ọ masịrị ihe ha na-ahụ, ị ​​ga-enwe ndị debanyere aha na nlele na YouTube, nke ga-abawanye ohere ị nwere ịbụ YouTuber oge niile. Were ya na ị ga -enweta ezigbo ego na YouTube na Instagram. Ụda na -akpọ, ọ bụghị ya?
Soro ụdị ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ wee nweta ụgwọ ọrụ: Mgbe ịmalitere ịhụ na Instagram, ụdị ndị ọzọ na ndị na-emepụta ọdịnaya na-arụ ọrụ na niche gị ga-achọ ka gị na gị rụkọọ ọrụ. Ụbọchị ndị a, ọ bụ ihe gbasara imekọ ihe ọnụ na obere banyere asọmpi na mgbasa ozi ọha, ọ na-arụkwa ọrụ. Kedu uru ọ bara ịkwanye onye ọzọ mgbe azụmahịa abụọ/ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ịrụkọ ọrụ ọnụ ma na-azụta ihe ọ rụzuru na ihe ịga nke ọma nke ibe ya? Anyị na-ahụ vloggers njem na-arụkọ ọrụ na ndị vloggers ibe, yana ndị na-egwu egwu, na ndị na-ese ihe na-arụkọ ọrụ. Obi abụọ adịghị ya na Instagram emeghela ọtụtụ ụzọ ohere. Ị ga-ebuli egwuregwu nke gị ma tinye uche n'iwepụta ọdịnaya nke na-adọta uche nke ndị na-ege gị ntị. Ozugbo ị nwere ọnụ ọgụgụ dị mma nke ndị na-eso ụzọ, ị nwere ike ịbịakwute ụdị ndị ọzọ maka imekọ ihe ọnụ. Ọ bụ ezie na a gaghị anabata arịrịọ nkwado gị niile, ụfọdụ ga-agafe ma ọ bụrụ na adọpụ ya nke ọma, ha nwere ike ịkwanye ndị na-eso ụzọ gị elu. Mgbe ị rutere n'ogo 'social media influencer', ị nwere ike ịtụ anya arịrịọ nkwado sitere na ụdị ndị ọzọ na ndị na-emepụta ọdịnaya, usoro ahụ ga-aga n'ihu. Dị ka onye na-eme ihe, ị ga-enwekwa ike imekọ ihe ọnụ na ụdị sitere na niche ndị ọzọ na-enye ngwaahịa ndị na-emepụta ihe. na-akwado niche gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị bụ onye egwu ma jikwaa nweta ọkwa 'influencer' na Instagram, ị nwere ike ịbịaru nso ụdị na-emepụta ma na-ere ngwaahịa ị na-egwu. Onye na-egwu guitar nwere ike iji guitar na / ma ọ bụ onye na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emekọ ihe, onye na-egwu ụda nwere ike imekọ ihe ọnụ na ụlọ ọrụ na-emepụta igwe okwu, na ihe ndị ọzọ.
Atụmatụ Instagram maka ịkwalite akara gị
Ozugbo ibe Instagram gị bidoro ka a chọpụta gị ma ị nwetakwu ndị na-eso ụzọ, ị nwere ike iji atụmatụ azụmaahịa pụrụ iche nke Instagram ịchọta karịa ndị na-eso Instagram. Mgbe ị na-eji njirimara ndị a niile abụghị iwu, nweere onwe gị ịgwakọta. Wayzọ a, ị nwere ike ime ka ọtụtụ nke Insta si na-wuru ngwaọrụ ka jirichaa gị ika-apụghị iru. Ewezuga atụmatụ ịkekọrịta foto oge niile, Instagram na-etu ọnụ maka atụmatụ azụmaahịa ndị a.
Anyị tụlere IGTV na mbụ, mana nke ahụ bụ naanị usoro ikpo okwu dị ogologo. Ngwaọrụ Instagram ngwa a na-enye ohere maka obere vidiyo vidiyo. Ewezuga ụdị ebuputara vidiyo na-adị mkpụmkpụ, vidiyo vidiyo ndị ọzọ a na-enye site na ikpo okwu gụnyere vidiyo ndụ na akụkọ. Ihe ngosi vidio a na - ebi ndụ na - enye ohere ị ga - eji wulite ezigbo akara na nghọta - ihe na - abawanye uru kwa ụbọchị. Nke a sitere na asọmpi na-arịwanye elu na-agafe niche. Ọ bụ ụzọ dị mma ụmụazụ gị ga-esi jiri gị na ezigbo mmekọrịta. Oge ọ bụla ịmalitere igodo vidio dị ndụ, a na-agwa ndị na-eso ụzọ gị ozi. Ikpokoro nke ugbu a kwalitere ikike vidiyo vidiyo ya ugbu a, ugbu a, ndị ọrụ abụọ nwere ike ịpụta na vidiyo dị ndụ site na ngwaọrụ abụọ dị iche. Site na nyocha a na - ebi ndụ iji bupụta ngwaahịa na - arụ ọrụ na - arụkọ ọrụ ọnụ, ohere dị na njedebe. Ọ bụrụ na algorithm nke Instagram dị gị mma, vidiyo vidiyo gị nwere ike ọbụna mee ya na vidiyo "Top Live" na peeji nke Instagram Chọgharịa peeji nke. Ọ bụrụ na o mee, ndị ọrụ Insta nwere ike ịlele vidiyo gị n'akụkụ ụwa niile, na-eme ka ohere nke ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ bawanye. Enwekwara ihe ngosi 'Akụkọ' nke na-enye ohere ilele onyonyo nke 10 na nke nlere vidiyo nke 15. Ọ bụ atụmatụ mara mma nke ejiri ụdị na ndị na-eme ihe ike iji melite ụmụazụ ha gbasara ngwaahịa, ọrụ ha, na / ma ọ bụ ọdịnaya edepụtara. Instagram nyekwara ntanye ngwaahịa n'ime atụmatụ 'Akụkọ', nke pụtara na ọ bụrụ na ị na-egosipụta ngwaahịa ị na-ere n'otu n'ime 'Akụkọ' gị, ị nwere ike ịkpado ya. Ndị na-eso ụzọ nwere mmasị ịzụrụ ya nwere ike pịa akara ngwaahịa ma zụta ya na weebụsaịtị gị.
Mgbasa ozi Instagram
Ewezuga ịkekọrịta foto na vidiyo, ịnwekwara ike biputere mgbasa ozi iji kwalite ihe ị nwere inye na Instagram. Enwere ntọala dị iche iche ị nwere ike ịnwale iji chọta ụdị ụdị mgbasa ozi ga-agba maka akara gị. Inwere ike iji ọdịnaya dị adị na ibe gị ma gbanwee ha gaa na mgbasa ozi na atụmatụ Mgbasa ozi Instagram. Iji mepụta ma jikwaa mgbasa ozi na Instagram, ị ga-eji Facebook's Ad Manager dị ka Instagram bụ ngwa Facebook.
Ndị ọrụ Instagram nwere ike ịkwalite ọkwa ịkwanye, nke ga-agwa ha mgbe ibe ha na-eso bulite foto ọhụrụ, vidiyo, wdg. Iji jiri atụmatụ a, ị ga-agba ndị na-eso ụzọ gị dị ugbu a ume ka ha mee ihe. N'ihe niile edere gị, gụnye oku iji rụọ ọrụ, na-agwa ndị na-eso ụzọ gị ka ị nwee ike ịkwalite ọkwa maka ọwa gị. Ọ bụ ezie na ụmụazụ gị niile agaghị aza oku gị, ụfọdụ ga-aza. Ọ bụrụ na ihe ha kwuru masịrị ha, ha ga-eso ndị enyi ha na ndị na-eso ụzọ ha kerịta ya. Pma ọkwa ngbanye nwere ike ọ gaghị abụ ụzọ kachasị mma gị maka ịnweta ọhụhụ karịa na Instagram, mana ọ nwere ike ịbụ ezigbo enyemaka. mmechi Yabụ, ugbu a ị marala ọtụtụ ndị na-eso ụzọ Instagram nwere ike ịbara gị uru yana ụfọdụ atụmatụ azụmaahịa kachasị ike nke Insta. Na-esote, ị kwesịrị ikpebi otu ịchọrọ isi nweta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ. Eeh, n'ụzọ niile, ịnwere ike ịnara ụzọ ndụ wee chere ka ndị mmadụ tinye ọdịnaya gị tupu ị pịa bọtịnụ 'Soro'. Agbanyeghị, ọ na-eri oge ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele ogo nke ihe ịga nke ọma na Instagram, ọ ga-aka mma ma ị họrọ ụzọ ọzọ. Site na ịbanye maka mmemme nke na-abawanye ọhụhụ ngwa ngwa Instagram, ị nwere ike nweta ndị na-eso ụzọ Instagram n'efu ma nwee mmasị na ngwa ngwa. Ihe omume ndị ahụ akwụwo ụgwọ dị iche iche. Ọ bụ ezie na ndị akwụ ụgwọ ga-ewetara gị nsonaazụ karịa ọsọ, ị nwere ike nweta ọtụtụ site na iji nsụgharị ndị akwụghị ụgwọ. Akụkụ kachasị mma banyere mmemme dị otú a bụ na enweghị bọọlụ metụtara. Yabụ, ụmụazụ ọhụụ ọhụụ ị nwetara bụ ezigbo ndị ọrụ Instagram. Ya mere, gịnị ma ị denye aha maka mmemme dị otú ahụ ma hapụ ka ika gị nwee mmetụta dị ukwuu karịa mgbe ọ bụla tupu ịntanetị?
Jiri Ije Ozi Na-eje Ozi 500,000 + Instagram Users
Lelee nyocha ndị ọrụ TurboMedia na ahụmịhe ha
TurboMedia weputara ibe anyi Instagram ngwa ngwa kari onye obula!
Ha na-enye ọrụ kachasị mma n'ịntanetị.
M na-eji TurboMedia eme ihe ruo afọ 2 wee nweta mmụba karịa ka m kwụrụ! Umuigbo ekele m unu.
Ihe ịma aka azụmaahịa kacha emetụta na ndụmọdụ maka imeso ha
Enwebeghị oge kacha mma maka azụmaahịa itinye ego na ahịa Instagram influencer. Otú ọ dị, n'agbanyeghị uru nke influencer marketing ga-enye, na ...
Usoro SEO maka ịbawanye nchọpụta na Instagram
N'ihe karịrị otu ijeri ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike kwa ọnwa, Instagram bụ otu n'ime usoro mgbasa ozi mmekọrịta kachasị ike maka ụdị ma a bịa na dijitalụ…
Ndụmọdụ maka ịdepụta ngwaahịa gị n'ụzọ ziri ezi na mgbasa ozi ịzụ ahịa Instagram
Ịzụ ahịa n'ịntanetị aghọwo ụkpụrụ ọhụrụ. Site na uwe gaa na ngwa nri, enwere ike zụta ihe niile n'ịntanetị. Otu n'ime ikpo okwu ghọrọ ebe ahịa...
Dị njikere maka ịrịa nje ahụ?
TurboMedia bu Nduzi Mgbasa Ozi Mgbasa Azụmaahịa maka akaụntụ azụmahịa na nke onwe nke Instagram. Anyị na-enyere ndị ahịa anyị aka inwekwu ndị na-eso ụzọ, mmasị, echiche na nkwupụta iji mee ka mmetụta ha dị n'ịntanetị.
Copyright right 2022 TurboMedia (turbomedia.io). Ikike niile echekwabara. Sitemap
Ụzọ isi nwetaghachi akwụkwọ akụkọ Instagram ochie maka ọdịnaya ọhụrụ
Uru nke ịgbakwunye njikọ gị na akụkọ Instagram gị
Copyright right 2020 TurboMedia (turbomedia.io).
Weebụsaịtị a na-eji kuki iji hụ na ị nwetara ahụmịhe kachasị mma na weebụsaịtị anyị